ဂင်းနစ် ကမ္ဘာ့စံချိန်မှတ်တမ်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ခံရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား မင်းကွန်း တိပိဋက ဆရာတော် ဘုရားကြီး အကြောင်း ဂင်းနစ်စာအုပ်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ စံချိန်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်ရာမြန်မာနိုင်ငံမှ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတစ်ဦးလည်း ပါဝင်ခဲ့ ပါသည်။… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Ko Chit မှ May 31, 2012 10:00pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
ဗုဒ္ဒဘာသာနှင့်ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာမိသမျှထဲက အပိုင်းအစတခု.....
စာအုပ်လေးတအုပ်ဖတ်ဖူးပါတယ်...မူရင်းစာေ၇းဆရာက MICHAEL H.HARTပါ အမေရိကန်လူမျိုး နက္ခတ္တရာပညာရှင်တဥိး။
ရှေ့ နေအလုပ်ကိုလဲလုပ်ပါတယ်... အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ စစ်တုရင် အသင်းကြီးရဲ့ ကျွမ်းကျင်သူလဲ ဖြစ်ပါတယ်..သူက
ဒီစာကို ၁၉၇၈ ခုနှစ် NEWSWEEK MAGAZINE မှာရေးခဲ့တာပါ...ဒါကို ဆရာမြင့်ဇံက
ဘာသာပြန်ပါတယ်..စာမူခွင့်ပြုချက်က.. ၁၀၉/၂၀၀၄ (၉) ဖြစ်ပါတယ်..ထုတ်ဝေသူက ဦးညိုမှိုင်း ၊ အာမန်သစ်စာပေ၊ အမှတ်
(၁၄၃) ၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Aye Thu Zar Win မှ May 31, 2012 9:34pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
Aye Thu Zar Win မှ May 31, 2012 5:07pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
မှတ်ချက်မရှိသေးပါ။ တန်ဖိုးရှိသော စကားများ.....
ပါပကမ္မံ နာမေတံ အပ္ပကန္တိ နအဝမညိတဗ္ဗံ-မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံဆိုတာ အနည်းငယ်ပဲဟု မထီမဲ့မြင်မပြုရဘူး။ အထင်အမြင်မသေးရဘူး၊ ရေစက် ရေပေါက် ကျဖန်များလျှင် အိမ်တံစက်မြိတ်မှာထားတဲ့ ရေအိုးကြီးပင် ရေတွေပြည့်လာသလိုဘဲ ပြုဖန်များရင် မကောင်းမှုတွေနဲ့သာ ပြည့်နေတတ်တယ်။ အဲ့ဒီအခါ ပစ္စုပ္ပန် တမလွန် နှစ်ဌာနစလုံးမှာ ဆင်ရဲဒုက္ခတွေ ပင်လယ်ဝေနေလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် မကောင်းမှုဆိုတာ အမြစ်ပြတ် မပယ်သတ်နိုင်သေးရင်တောင်မှ ဝေးဝေးက ရှောင်ရှားရမယ်။ ဒါကြောင့် သီလက မပေးနိုင်သော စည်းစိမ်ဥစ္စာဟူ၍မရှိ။ ခန္တီ မေတ္တာတို့ဖြင့် မအောင်မြင်နိုင်သော… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Aye Thu Zar Win မှ May 31, 2012 4:57pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
ဘာသာတိုင်းဟာ ဘယ်အပေါ်မှာ အခြေခံလည်းလို့မေးရင်.ယုံကြည်မှုလို့ပဲ ဖြေရပါလမ့်မယ်. အဲဒီ ယုံကြည်မှုဟာလည်း နှလုံးသွင်းမှု အပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်. နှလုံးသွင်းမှုကြတော့ အသိကို သတိကပ်ခြင်းပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်.
အဲဒါတွေ အားလုံးပြည့်စုံဖို့ကတော့ အာရုံတွေ ရှိနေရပြီး ပညတ်ချက်တွေ ရှိနေရတယ် ဆိုတာ
မှတ်ချက်။ ။ကိုယ်တိုင်ရေး.. လင်းကိုကို မှ May 31, 2012 4:26pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
ရာသီမေထုံ - လနယုန်
ရာသီမေထုံ - လနယုန် - သင်းထုံမြတ်လေး - စံပယ်မွေး
နယုန်လ ဘွဲ့ ရိုက်ချိုန်းရယ်တဲ့စည်ပုစွန်။ ငွေဝန်းစန္ဒာနှင့် ကြယ်ဇေဠာယှဉ်ကာပြည့်တယ်
နွေနယုန်မေထုန်ရက်မှာလ နဘေဘုံရေမှုန်တက်ပါလို့… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
မောင်သုည မှ May 31, 2012 3:30pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှု့ပွဲလမ်းသဘင်ကြီးကြီးငယ်ငယ်အစုအဝေးတို့တွင်ပရိတ်သတ်စုံလင်သောအခါ နိဗ္ဗာန်ဆော်ဓမ္မဂေါသကပုဂ္ဂိုလ်က ရတနာသုံးပါးအားတညီတညွတ်တည်းကန်တော့ကြပါစို့ခင်ဗျာ ဟုတရားမိုးချုန်းလိုက်သောအခါ လောကဥပမာ- မိုးဦးကျတခို တောင်အရပ်ကမိုးခြိမ်းလိုက်သည်နှင့် တောထဲမှရွေဥဒေါင်းတို့သည်တကောင်နှင့်တကောင်အချိန်းအချက်မရှိတပြိုင်နက်တညီတညွတ်တည်း( ကေကာ...ကေကာ )တွန်ကျူးကြသလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးကောင်းသား အမျိုးကောင်းသမီးတို့သည်( သြကာသ )အစရှိသော ရတနာသုံးပါးကန်တော့သောအသံတို့သည် ညံထွက်လာပါတော့သည်… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
မတင်တင်မိုး မှ May 30, 2012 5:00pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
မသွားခင်မှာ အဝေးကြီးကို မျှော်ကြည့်ပါ. သွားပြီ ဆိုရင်တော့ တစ်လှမ်းချင်းစီကိုပဲ ကြည့်ပါ.
မလုပ်ခင်မှာ စဉ်းစားပါ ဆင်ခြင်ပါ ဆုံးဖြတ်ပါ. လုပ်ပြီဆိုရင်တော့ တစ်ဆင့်ချင်းစီကို သတိထား ဂရုစိုက်ပြီး လုပ်တက်အောင် လေ့ကျင့်ပါ..
အများကြီး တွေးပါ အများကြီး စဉ်းစားပါ အများကြီး ဆင်ခြင်ပါ. သို့သော် တစ်ခုချင်းစီပဲ လုပ်ပါ..
တရားသဘောကို နားလည် သဘောပေါက်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့. သတိထားပြီး တွေး သတိထားပြီး ပြော သတိထားပြီး လုပ် လုပ်ရင်းနဲ့ … ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
လင်းကိုကို မှ May 30, 2012 3:04pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
“ဒုက္ခ” က မိမိ၏ ညံ့ကွက်၊ ရှော်ကွက်၊ ပျော့ကွက်၊ ချို့ယွင်းချက်ကို မူယာမာယာမရှိဘဲ ဒိုး ဒိုးဒေါက်ဒေါက် ထောက်ပြတတ်သည်။ ကိုယ့်အကျိုးကို မလိုလားသူ၊… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) မှ May 30, 2012 10:29am တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
ထူးကဲ ကြည်ညိုမိသော..... အရှင်များ (၄)
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏... တပြည့် သာဝကများတွင် … ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ကွန်ဆူးမား မှ May 28, 2012 10:30pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
မှန်တာလုပ် - ဟုတ်တာပြော
နေပြည်တော် မြန်မာ့အသံမှ ၂၆ (စနေနေ.မနက် ၈း၄၀ ) နဲ. ၂၇ ( တနင်္ဂနွေနေ. ညနေ ၆း၄၀ ) မှာ အသံထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ "လူငယ်မှတ်သား သုတစကား" အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ် - နားဆင်ကြည့်ကြပါလားနော် -
ကလေးတို.ဆရာမ မှ May 28, 2012 9:00pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
ထူးထူးခြားခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနှစ်ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းဖွင့်ဖြစ်တယ်။ ထင်သလောက်တော့မလွယ်ကူခဲ့ဘူး။ ကလေးတွေကို ပျော်ရွှင်အောင်ထားရတာ လူကြီးကို ကြည်နူးအောင်လုပ်ရတာထက်ပိုခက်ခဲတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆင်ပြေအောင် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ ပြောချင်တာကတော့........
လူတွေဟာ ဘယ်နေရာကမဆို သင်ယူလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတာပဲ၊ ကလေးတွေဆိုပေမယ့် သူတို့မှာလည်း ကိုယ်ပိုင်အမြင်တွေရှိကြတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်မမြင်တဲ့အရာတွေကိုတောင် သူတို့တတွေ မှန်းဆနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်။
သိလာခဲ့ရတာကတော့ ....- ကလေးဖြစ်ဖြစ်,လူကြီးဖြစ်ဖြစ်… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှ May 28, 2012 7:30pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
ဖမ်းခြင်း နှင့် လွှတ်ခြင်း ရဝေနွယ်(အင်းမ)
မြတ်စွာဘုရား သာဝတ္တိပြည် ဇေတ၀န်ကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးနေစဉ်အခါက ဒကာဒကာမတွေဟာ ဥပုသ်နေ့ရောက်ပြီဆိုရင် မနက်ပိုင်းမှာ အဝတ်ဖြူလေးတွေဝတ်ပြီး ဘုရားကျောင်းကိုသွားလေ့ရှိပါတယ်။ ကျောင်းရောက်တဲ့အခါ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ဆွမ်းဒါနပြုပြီး နေ့လည်ပိုင်းမှာ တော့ ကိုယ်နဲ့အကျွမ်းဝင်းရာ ကိုယ်ကြည်ညိုရာ ရဟန်းတွေဆီသွားပြီး ဆည်းကပ်ကြပါတယ်။
ညနေချမ်းရောက်လာရင်တော့ တရားပွဲကျင်းပလေ့ရှိကြပါတယ်။ အလှည့်ကျရဟန်းတော်တွေက တရားဟောကြပါတယ်။ တရားဟော ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ တရားပွဲရှိရာကို သွားနာကြပါတယ်။
အောင်မင်းထွန်း မှ May 28, 2012 5:31pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
လောကမှာ ပုဂ္ဂိုလ် နှစ်မျိုးရှိပါတယ်၊ တစ်မျိုးက “အဆိုးမြင်သမား” နောက်တစ်မျိုးက “အကောင်း မြင်သမား”..တဲ့။ “အဆိုးမြင်သမား..”..က မြင်သမျှ ကြားသမျှကို အဆိုးဘက်ကချည်း ရှုမြင်သုံးသပ်ပါတယ်။ ကောင်းတာလေး ရှိတာကိုတောင်မှ လျှော့ပေါ့စဉ်းစားတယ် ၊ တစ်ဘက်က သူတစ်ပါးကို အဆိုးမြင် သလောက် မိမိဘက်ကျတော့ အကောင်းမြင်တတ်တယ်။ သူတစ်ပါး ဘယ်လောက်တော်တော် ငါ့လောက် မတော်သေးပါဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ် ရှိနေပါတယ်။ ဒါကို စာက “ပရ၀မ္ဘန အတ္တုက္ကံသန” လို့ ခေါ်တယ်။… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ကိုညီညီတင် မှ May 28, 2012 1:19pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
ပူသည့်မျက်နှာ မှ အေးသည့်မျက်နှာသို့
ပူသည့်မျက်နှာ မှ အေးသည့်မျက်နှာသို့။ by ရဝေနွယ် - အင်းမ မျက်နှာ က သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ ပူသည့် မျက်နှာရယ်၊ အေးသည့် မျက်နှာရယ် မပူမအေး မျက်နှာ ရယ်ပါ ။ တစ်ချို့များ မျက်နှာ မြင်လိုက် ရရင်ပဲ သူ့မျက်နှာမှာ အအေးဓတ်က အထင်းသား ပေါ်နေတာပါ။ မျက်နှာက ကြည်နေတာပါ။ သူတင်လား ဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြင်ရတဲ့ သူရဲ့ရင်ကို အေးသွားတာပါ။ ကုသိုလ်တွေ ရင်ထဲမှာ ပြည့်နေမယ်၊ စိတ်ထား လေးတွေကောင်း နေမယ်ဆိုရင် အေးတဲ့ မျက်နှာကို ရနေတာပါ။ တစ်ချို့ ကျတော့ မျက်နှာမြင်လိုက် ရတာနဲ့ သူ့မျက်နှာ မှာ အပူဓတ်က အထင်းသား… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
swe မှ May 28, 2012 1:00am တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့လယ်ရှိ ဘီဘီစီ ရုံးရှေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား ၅၀၀ နီးပါးခန့်က ဧပြီလ ၂၉ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့က သွားရောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဆန္ဒပြရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံနေရာတွင် ရခိုင်လူမျိုးများ၏ ဓါတ်ပုံကို မဖေါ်ပြဘဲ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ အခြေချ ၀င်ရောက်နေထိုင်သူ ဘင်္ဂလီများ ဓါတ်ပုံကို ရိုဟင်ဂျာ… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
uthannaing81 မှ May 28, 2012 12:13am တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
မှတ်ချက်မရှိသေးပါ။ ဘုရား ထက်ကြီးသော ဘုရားလူကြီးများ... (၃)..
နှစ် ၃၀ကျော် ဝါတွင်းကာလ အပါတ်စဉ် ဆွမ်းကပ်လာသော မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ပုသိမ်ညွန့် ၅လမ်း ဆွမ်းလောင်း အဖွဲ့မှ ဆောက်လုပ် ပြီးစီးသွားသော… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
uthannaing81 မှ May 28, 2012 12:05am တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
`မာရ်´ ဟူသော ပါဠိစကား၏ အနက်မှာ `သေခြင်း´ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ပါဠိဓာတ်ကျမ်းများက `မရ ၊ ပါဏစာဂေ ၊ မရဓာတ်သည် အသက်ကို စွန့်စေခြင်း အနက်၌ ဖြစ်၏။´ဟု ဆိုသည်။ ပါဠိအင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်များက `မာရ´ကို Death သေခြင်း ဟု ဖွင့်ဆိုကြသည်။ `မာရ၊ မာရ´ဟူသည် သေခြင်းကို ဆိုလိုပေသည်။ `မာရဓမ္မ´ဟူသည် သေခြင်းတရား ပင်ဖြစ်သည်။ ဟူ၍ ဖွင့်ပြတော်မူထားသည်။ သို့ဖြစ်၍ သက်ရှိသတ္တ၀ါများ သေခြင်း၊ သေစေခြင်းကို `မာရ...မာရ်´ဟုခေါ်ကြောင်း လက်ရင်းကျကျ မှတ်သားရပါသည်။ သတ္တ၀ါများ သေရခြင်း၏ အကြောင်း၊ သေခြင်းမကင်းရသည့် အကြောင်းများကို… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) မှ May 27, 2012 11:30pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
ယမမင်း ။ ။ မိမိကိုယ်တိုင်နားလည်သော အရွယ်သို့ရောက်သောအခါ ထိုကလေးများကိုကြည့်၍ ““ငါသည် ဘာမျှမသိနားမလည်ရှာသေးသော ယခုလို… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) မှ May 27, 2012 11:24pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
2013May (236)April (268)March (369)February (306)January (300)2012December (220)November (228)October (305)September (215)August (192)July (197)June (154)May (183)April (202)March (267)February (301)January (357)2011December (389)November (278)October (174)September (314)August (350)July (342)June (235)May (191)April (61)March (144)February (5)1999November (42) ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺ မှ(ကြိုဆိုပါတယ်)
Top News · Everything Soe Gyi shared လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post on Facebookဒုဗ္ဗလ ၀ိပဿနာဆိုတာ ဘာလဲ38 minutes agoSoe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဒုဗ္ဗလ ၀ိပဿနာဆိုတာ ဘာလဲ'38 minutes agoSoe Gyi shared လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post on Facebookကာမဂုဏ်ချမ်းသာတကာတွေထဲမှာ ဘယ်ကာမဂုဏ်ဟာ အချမ်းသာဆုံးလဲ43 minutes agoSoe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတကာတွေထဲမှာ ဘယ်ကာမဂုဏ်ဟာ အချမ်းသာဆုံးလဲ'44 minutes agoSoe Gyi shared လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post on Facebookဒါန သီလ သမထ ကုသိုလ်တို့က ကိလေသာတို့ကို မပယ်နိုင်ဘူးလား47 minutes agoSoe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဒါန သီလ သမထ ကုသိုလ်တို့က ကိလေသာတို့ကို မပယ်နိုင်ဘူးလား'47 minutes agoSoe Gyi shared မူကြိုဆရာ's blog post on Facebookမေတ္တာလေ.ကျင်.ခန်း1 hour agoSoe Gyi liked မူကြိုဆရာ's blog post 'မေတ္တာလေ.ကျင်.ခန်း'1 hour agoThaung Tan liked whitecolor's blog post 'တကယ့် ဥပေက္ခာဆိုတာ'1 hour agoThaung Tan liked အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင် မင်းကိုဘေးဖယ်'1 hour agoSoe Gyi liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် ဒေသနာဆိုသည်မှာ'1 hour agoSoe Gyi shared မူကြိုဆရာ's blog post on Facebookပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် ဒေသနာဆိုသည်မှာ1 hour ago More... RSS